महिला जनप्रतिनिधिका तीन वर्ष: बैठकमा जाऊ ताली बजाऊ - Arthapage
प्रकाशित मितिः २ भाद्र २०७७, मंगलवार १३:१९ August 18, 2020
स्थानीय सरकारको प्रमुख/उपप्रमुख र वडा सदस्यमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको अवस्था के छ ? दाङको बबई र गढवा गाउँपालिका अनि तुलसीपुर उपमहानगरका महिला जनप्रतिनिधिको जवाफ छ— ‘अरूको निर्णयमा ताली बजाउने र बैठक–भेलामा आऊजाऊ गर्नेमा सीमित छ हाम्रो भूमिका ।’
अञ्जना चौधरी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
तस्वीरहरू: अञ्जना चौधरी
त्यसो त सावित्रीले दलित समुदायको सीप, कला र संस्कृति जर्गेना गर्न गाउँपालिकास्तरीय दलित संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै गरेकी थिइन् । तर केही समय उनको प्रस्ताव बेवारिसे बन्यो । उनी थप्छिन्, “कहिले जग्गा छैन भनियो, कहिले यहाँ दलित संग्रहालय बनाउनुहुँदैन भनेर टारियो ।”
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ६६ वटा मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये सावित्रीले ४४ वटा मुद्दामा छिनोफानो गरिन् । उनका अनुसार, न्यायिक समितिमा सबै भन्दा धेरै कुटपिट तथा गालीगलौजका १८ वटा मुद्दा थिए । त्यस्तै कुलोपानी बाँधमा १२, पारिश्रमिक ठगीमा २, जालसाजीमा २, पारिवारिक विवादमा ६, आठासाधीमा १२ , सम्पत्ति हिनामिनामा २, सिफारिश रोक्कामा २, पालनपोषण तथा नाता प्रमाणितमा ५, लेनदेनमा १, अंश विवादमा ३ र घरभाडामा १ सहित ६६ मुद्दा थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट ल्याउदा गाउँसभामा शान्तिले रु. ४७ करोड ८३ लाख पेश गरेकी थिइन् । तर, पछि गाउँपालिकाले गाउँसभाले पारित गरेको भन्दा बढी रु. ५६ करोड ९७ लाख रातो किताबमा प्रकाशित गर्‍यो । गाउँपालिकाले सभाले पारित गरे भन्दा बढी बजेट प्रकाशित गर्दा आफूलाई जानकारी नै नदिएको शान्तिको कथन छ । उनको अनुपस्थितिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम अहिर र वडाध्यक्षहरू मिलेर २६ साउन २०७६ मा रु.५ करोड बराबरका परियोजना भागबण्डा गरे । उपप्रमुख चौधरीले त्यसको विरोध गरेपछि अहिरले उपप्रमुख चौधरीले खर्च गर्न पाउने गरी रु.१ करोडको योजना बनाउन आग्रह गरेका थिए । चौधरी भन्छिन्, “मैले त्यो प्रस्ताव मानिनँ ।”
दृष्टान्त हेरौंः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ का दलितका लागि साबुन उत्पादन गर्ने तालिमको लागि वडाले रु.१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यो कार्यक्रमको संयोजक टीकालाई तोेकिए पनि उनलाई कार्यक्रमभरि सही गर्न मात्र लगाइयो । सबै काम वडाका कर्मचारीले गरे । त्यो आर्थिक वर्षको वैशाख महीनामा भएको तालिममा दलित तथा अति विपन्न परिवारका २५ जना सहभागी थिए । टीकाकुमारी भन्छिन्, “दलित र विपन्नको बजेट हामीलाई परिचालन गर्न दिइँदैन भने अरू के काम गर्न देलान् ?” उनले महिला जनप्रतिनिधिलाई गरिने व्यवहार नै विभेदपूण प्रवृत्तिको रहेसम्म दलित र महिलाको नाम मात्रको प्रतिनिधित्व हुने बताइन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर सभा ।
महिला वडा सदस्यहरूले बजेट आउनुअघि भेउ नै पाउँदैनन् । जस्तोः तुलसीपुर उपमहानगरले गएको १० असार २०७७ मा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गर्‍यो । तर, रूपा लगायतका धेरै महिला वडा सदस्यहरूले त्यो बजेट सभामा मात्र थाहा पाए । रूपा भन्छिन्, “हामीले १२ भदौ २०७४ को नगरसभामै अबदेखि प्रत्येक जनप्रतिनिधिलाई दुई/तीन दिन अघि नै बजेट उपलब्ध गराउनु भनेर भनेका थियौं । तर अहिलेसम्म पनि त्यसको सुनुवाइ भएन । एकैपटक नगरसभामा सार्वजनिक गरेपछि हाम्रा कुरा नीति कार्यक्रममा कसरी पर्छन् र ?”
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ की वडा सदस्य कमला थापा तीन वर्ष बित्दा आफूले कार्यपालिका बैठकमा जनताका माग पर्‍यानु नसकेको बताउँछिन् । कमला भन्छिन्, “तीन वर्षअघिको नगरसभामा म लगायत साथीहरूले प्रमुख र उपप्रमुखलाई वर्षमा एकपटक कार्यपालिकाको बैठकमा वडा सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराउन भनेर आग्रह गरेका थियौं तर, सुनुवाइ भएन ।” उपमहानगर प्रमुख पाण्डे भन्छन्, “संविधानमा नै वडा सदस्यहरूलाई नगर कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी गराउने अधिकार नभएकाले हामीले सहभागी गराउन सकेनौं ।”
प्रकाशित मितिः २ भाद्र २०७७, मंगलवार १३:१९ |
Prevपुनरकर्जामा होमस्टे लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
Nextसंघीय सरकारले पर्यटन विकास आयोजनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसंग प्रस्ताव माग्यो